China Spherical Roller Bearings vagadziri uye vatengesi |Xinri
Spherical roller inotakura mhete yemukati ine makoramu maviri emujaho, yeSpherical yekunze mhete yemujaho uye inotenderedza element mabearings edhiramu, yekunze mhete yenhangemutange nzvimbo yepakati uye inotakura nzvimbo inopindirana, saka neotomatiki yekuzvigadzirisa kuita, kunyangwe kana paine kukanganisa kwekuisa pakati. iyo inotakura uye inotakura bhokisi shaft deflection, yakarereka mukati nekunze kwedenderedzwa rezviitiko zvinogona kushandiswa zvakajairika.
Iyo spherical roller bearing ine yakakwira kutakura uye yakanaka vibration kuramba, uye inogona kutsiva iyo concentricity kukanganisa kunokonzerwa nemachining, kuisirwa uye shaft deformation.
●Kukweshana kwakaderera uye tembiricha inomhanya, ruzha rwakadzika uye kutenheka
● Hunhu hwepamusoro uye masimba ekuita
● Gadzirisa radial mitoro uye axial mitoro mumativi ose maviri
●Anowanikwa nemhando dzemagirizi pazvimiro zvakawanda, anosanganisira girizi remhando yechikafu, girizi rekushisa kwepamusoro neSolid Oil.
●Kuwedzera kuvimbika uye kupa hupenyu hurefu hwekutakura uye lubricant sevhisi
1.Main akakodzera anochengetedza: stamping simbi yakasimbiswa retainers.Kage yesimbi yakadhindwa, girazi faibha yakasimbisa polyamide 66 keji, kageji yakagadzirwa nendarira maviri-zvidimbu.Yakagadzirwa brass integral cage, stamping simbi keji yezviitiko zvinozunguza.Kudedera keji yendarira.
2.Main applications: papermaking machine, reduction giya, njanji inotenderedza stock axle, rolling mill giya box bearing, rolling mill roller, crusher, vibrating screen, printing machine, woodworking machines, marudzi ese emaindasitiri ekudzikisa giya, vertical bearing ne seat centering.
3.Iri rudzi rwekutakura runonyanya kushandiswa mumafuta ekuchera rig, iron uye simbi michina, hydroelectric generator, vertical motors, ngarava ine propeller shaft, tower crane, extrusion machine, nezvimwewo.
Zvakapfuura: Cylindrical Roller Bearing
Zvinotevera: Deep Groove Ball Bearing